Umthandazo kuSanta Monica Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umthandazo kuSanta Monica
La Umthandazo kuSanta Monica Uyakwazi ukukunceda ucele intlalontle yabantwana bakho, umama wakhe ozincamayo, umzekelo wokunyamezela nothando, ukufezekisile ukuguqulwa konyana wakhe kwaye yiyo loo nto eyiqondayo kwaye esinceda. Ukuba ufuna ukuthandazela umntwana wakho, qiniseka ukuthandaza eSanta Monica.
1 Umthandazo oya kwi-Saint Monica ngabantwana bethu abahle
2 Umthandazo Wombulelo kuSanta Monica
2.1 INovena eya eSanta Monica
3 Umthandazo wokucela aBantwana
4 Umthandazo woSapho
5 Ngubani uSanta Monica?
Umthandazo oya kwi-Saint Monica ngabantwana bethu abahle
Owu mama ozincamayo, othandekayo uSanta Monica, ndijikela kuwe ndikucele ukuba undikhaphe kwaye undikhokele kule ndlela ekufuneka ndibengumzekelo kuyo kwaye ndikhokele unyana wam ngesandla kwindlela ehambelana nemithetho kaThixo, othandekayo uSanta Monica, wena ufeze uguquko kunyana wakho oyintanda, ndincede, ndincede wenze unyana wam alandele umendo wokulungileyo.
Wena owaqina emithandazweni yakho, ezingalweni zakho ezingcwele ndishiya unyana wam ukuba amkhusele, amkhokelele kwindlela yothando, uxolo nobunye. Ngamana ingubo yakho engummangaliso ingamgubungela kwaye imvumele ukuba aqaphele indlela eyiyo eya kuKristu iNkosi yethu. Wena mama woomama, thabatha isicelo sam phambi kweNkosi yethu, ukuze ikuvumele ukuba undincede kwaye undinike umoya ongapheliyo wokuthandaza onikwe ngumama wabo bonke oomama. Egameni leNkosi yethu uYesu Krestu Amen.
Umthandazo Wombulelo kuSanta Monica
Umama wabo bonke oomama, Wena oNgcwele oNgcwele Monica, oye waba ngumzekelo wethu, sifuna ukukubulela ngalo lonke ubabalo olunikiweyo. Siyakuncoma kuba ukwazile ukuthandaza ngokuzingisileyo nangokunyanisekileyo ukuguqula unyana wakho, usinika imfundiso yokholo nokuzinikezela okunyanisekileyo nokuzinikezele. Ngawe safunda, mama othandekayo, othandekayo uSanta Monica ukuba unyamezelo lubonisa kuphela ukholo lwethu hayi inkxalabo yethu.
Ngalo mthandazo kuSanta Monica siyavuma kwaye siyayithanda imizamo yakho yokukhokela unyana wakho kunye nomyeni wakho kwindlela kunye nelizwi likaThixo. Sinombulelo kuba sifundisiwe ukuba siqonde indima engcwele yoomama kunye nendlela esinokuba nefuthe ngayo kumakhaya ethu kunye nakumalungu osapho lwethu olunothando. Ngesi sizathu, namhlanje, mama othandekayo uSanta Monica, siyabulela kwaye sikunika ukugcinwa kunye nokukhuselwa kosapho lwethu. Amen.
INovena eya eSanta Monica
Kule mfutshane novena umfazi othandekayo kunye nomama u-Saint Monica, siyazivuma iintlungu ezingenakubalwa okwafuneka uzinyamezele kwaye woyise ebomini bakho, kodwa azizange ziyenze buthathaka intliziyo yakho kodwa bayenza yomelela, kuba awuzange ulahlekelwe lukholo.
Sithandwa sikaSanta Monica, ukuzithemba kwakho kunye nokuzingisa emthandazweni luphawu lokholo lwakho olukhulu, ngaphandle kokuphumla ubuthandaza yonke imihla ngokholo olumangalisayo ngomyeni wakho nonyana wakho, ke ngoko, ndiyakucela, mama othandekayo womama, ukuba undinike la mandla ukucela okwam kwaye ndikwazi ukufumana kuThixo inceba nokwaneliseka kwesicelo sam, kuwe omameleyo uyancengela ukundinika isicelo sam (yenza isicelo ngokunyaniseka nangokholo).
Ndiya kuyamkela intando yakhe kuba yiNkosi yethu ethatha isigqibo, kodwa ngokungena kwakho uyakumenza aqonde ukukhathazeka kwam ukuba ayikho enye into ngaphandle kosapho lwam ukukhonza iNkosi. Enkosi, Monica othandekayo, ngeNkosi yethu uYesu Krestu, kubunye boMoya oyiNgcwele, uThixo omnye ngonaphakade kanaphakade. Amen.
Umthandazo wokucela aBantwana
Umthandazo oya eSanta Monica ungummangaliso xa usenziwa ngentliziyo evulekileyo necocekileyo, kufuneka sinyaniseke njengoomama kwaye siqaphele ukuba siyayeka ukwenza, ukuba abantwana bethu bayemka kwindlela yeNkosi, umthandazo oya eSanta Monica unamandla kwaye ingummangaliso kwaye impendulo ikhawuleza xa sisebenza naye, ekukhokeleni ngothando usapho lwethu kwindlela yelizwi likaThixo.
Namhlanje othandekayo uSanta Monica, umama wabo bonke oomama, ndijikela kuwe, ndathoba ndaze ndathobeka phambi kokulunga kwakho, ukukucela ukuba undincede ndikwazi ukunyamezela obukufuneka uphumelele ukuguquka konyana wam (yitsho igama lonyana okanye abantwana bakhe) ezingalweni zakho zizele luthando ndibashiya ukuze ubakhusele ngengubo yakho kunye nokuthandazela kwakho okunamandla, ufezekise uguquko lokwenyani lwabantwana bam kwaye uyithande iNkosi yethu uYesu Krestu.
Sithandwa sikaSanta Monica, nceda kuwe ukuba iNkosi ikuphulaphule, ndiyakucela ukuba undilamlele, sisikelelwe ngomoya ofanayo wokuthandaza owakunika wona kwaye ndingathandaza ngokuzimisela sithandwa sam uSanta Monica njengokuba wenzela owakho. Ndizele lukholo nokuzithemba ukuba ndizokuviwa kwaye izicelo zam ziyavunywa. Ndiyabulela Monica oNgcwele egameni leNkosi yethu uYesu Krestu. Amen.
Umama ongummangaliso ongcwele nothandekayo u-Saint Monica, wena ngokunyamezela kwakho kunye nomthandazo osisigxina wakwazi ukuviwa yiNkosi yethu, ufezekisa ukuguquka kwendoda yakho nonyana wakho, kwaye emva kokunikwa wakwazi ukukhokela ubomi boxolo nothando ngaye kwicala, namhlanje Siyakucela emadolweni, sithandwa sikaSanta Monica, cela intsikelelo kaThixo kuthi, ukuze uthando nemvisiswano yakhe zilawule kusapho lwethu. Siyakubongoza ukuba uthandaze phambi koThixo iNkosi yethu ukuba ilungu ngalinye losapho lwam lihambe indlela engcwele kaThixo kwaye lifumane ubomi obungunaphakade kuyo. Monica oyiNgcwele, egameni likaYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele, Amen.
Ngubani uSanta Monica?
USanta Monica wayengumfazi ongumKristu owazalwa ngo-332 AD edolophini yaseThagaste, into esiyaziyo ngoku njengeAlgeria. Wayengumfazi kaPatricio kwaye kule manyano kwazalwa abantwana abathathu, omnye wabo ogama linguAgustín, owenza ubomi bakhe baba lusizi ixesha elide. UMonica wathandaza wanikela ngamadini ngenxa yomyeni wakhe, de babhaptizwa ngenye imini. Kwelakhe icala, uAugustine, umfana okrelekrele nonobuqili, akazange akhokele kubomi bobuKristu, wathandazela iminyaka uguquko lonyana wakhe uAugustine.
UMonica usweleke ecela uguquko kunyana wakhe kwaye wacela nabanye abantwana ukuba bangayeki ukucela inguquko kumntakwabo. UAugustine waguquka wanikela ngobomi bakhe kuThixo, namhlanje simqonda njengo-Agustine Oyingcwele.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ucinga ukuba likuncedile kukhangelo lwakho, siyakumema ukuba undwendwele amakhonkco acetyiswayo apha ngezantsi:
Dumisa uMariya umthandazo
Umthandazo kuSanta Marta